Global Voices teny Malagasy » Syria: Izaho No Aleppo, Aleppo Dia Izaho · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 17 Marsa 2014 14:27 GMT 1	 · Mpanoratra مرسيل شحوارو Nandika (en) i Marcell Shehwaro, Lauren RAJAOBELINA
Sokajy: Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana, Syria, Ady & Fifandirana, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Politika, Zon'olombelona, Ny Tetezana - The Bridge
Iray amin'ireo andian-dahatsoratra manokana nosoratan'i Marcell Shehwaro, mpitoraka bilaogy sady mpitolona, mitantara ny zava-misy marina amin'ny fiainana any Syria nandritra ny ady mitam-piadiana nifanaovan'ny tafika mpiara-dia amin'ny fitondrana sy ireo mikatsaka ny fanesorana azy ity lahatsoratra ity.
Marcell Shehwaro tany amin'ny fandevenana ny reniny, izay maty teo amin'ny toeram-pisavàn'ny tafika Syriana tamin'ny Volana Jona 2012. Ireo mpiara-mitolona manome voninahitra amin'ny fitondràna raozy mena. Sary avy amin'i Marcell Shehwaro.
Iza aho ? Noheveriko mandrakariva fa io no fanontaniana faran'izay saro-baliana na soratana, indrindra amin'izao fotoana izao, telo taona taorian'ny nanombohan'ny fitakiana fiovàna Syriana. Raha ny marina dia tsy tsy fantatro intsony hoe toa an'iza ilay izaho fahiny, ilay vehivavy tanora. Ho ahy ny fanoratana ho an'ny Global Voices dia fotoana hamerenako mifamatotra amin'izay mombamomba ahy, na fara-faharatsiny mampahatsiahy ahy ny niafaran'io olona miara-miaina amiko io, ary iza moa aho.
29 taona aho amin'izao fotoana izao. Marcell no anarako izay midika hoe ” Tanora mpiady”. Avy aminà fianakaviana kely no nipoirako. Pretra Ortodoksa ny raiko (efa maty), Hamindra fo amin'ny fanahiny anie Andriamanitra. Ary mpikarakara tokantrano sy renibe ny reniko (efa maty), Andriamanitra anie hamindra fo amin'ny fanahiny ihany koa.
Nianatra ho mpitsabo nify tao amin'ny tanànan'i Aleppo aho mandra-pahatsapako fa ny resaka sosialy no mety amiko. Nilaozako ny fianarana ho mpitsabo ary nianatra siansa politika aho- ny marina kokoa dia ny fifandraisana iraisam-pirenena sy ny diplomasia.
Tsy afaka milaza ny mombamomba ahy aho raha tsy tantaraiko anareo ny momba ny tanànako, Aleppo, satria tena mitovy izahay roa, samy rava, reraka, feno afo, feno hetaheta ho velona, mikorontan-tsaina.
Tanàna faharoa lehibe, misy mponina 5 tapitrisa araka ny tatitra amin'ny atontan'isa, any Syria i Aleppo. Ny tsy azoko antoka dia ny hoe firy tamin'ireo no nitoetra ary firy ireo mpialokaloka tnga avy any an-toerana hafa ka mivelona eto.
Tsapako ny fahakingako amin'ny fanehoako hevitra am-bava sy an-tsoratra hatramin'ny naha-tanora. Mety ho toetra nolovaiko tamin'ny raiko io. Nahafinaritra ahy ny nianatra nanoratra tantara tany an-tsekoly, asa mafy sy mahasorena ho an'ny mpianatra sasany. Vakiako daholo izay tonga eo an-tànako. Manana fahazarana ihany koa aho manoratra amin'izay rehetra azoko hanoratana : faktiora, taratasy famaohana any amin'ny trano fisakafoanana, ny sisin'ny boky izay vakiako. Ary rehefa tonga ny bilaogy, mazava ho azy, noraisiko. Ary izany izao mitranga izao.
Nanomboka nitoraka bilaogy aho tamin'ny 2008. Tamin'izany fotoana izany, nanana namana nanefa ny vidin'ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra tany am-ponjan'ny fitondrana Syriana aho. Ampy nahatonga ny fahalalahan'ny fanehoan-kevitra ho iraka efaiko io, izay mahatonga ahy ho mpanohitra ny fitondrana hatrany am-boalohany. Fahavalon'ny fitondràna iray izay nanakana ny fahalalahana ankapobeny sy ny fiainan'ny olona.
Nampikatso anay tsy hihetsika amin'ny lafiny rehetra, afa-tsy ny fanantenanay fa hisy fitakiana fiovana ihany koa any Syria, ny fitakiana fiovana tany Ejipta. Noho izany tsy nisy fieritreretana intsony fa tonga dia niaraka tamin'io onjan'ny fitakiana fiovana io aho. Nanoratra ny momba an'io aho tany am-boalohany. Avy eo, nanatevin-daharana ny mpanao hetsi-panoherana aho. Mbola tadidiko ihany ny fahatsapako ilay hafaliana miaro fitaintainana, ny tahotra sy ny zavatra manelingelina ahy tao an-tendako rehefa nihiaka ny hoe ” Tian'ny vahoaka hiendaka ny fitondràna!” .
Nandritra ny hetsika iray, nisy bala nipatrapatraka avy amin'ny basin'ny tafika Syriana teo amboninay, ary nanomboka nihazakazaka ireo nanodidina ahy. Hitako avy eo fa iray tamin'ireo olona ankon'ny tahotra aho izany no tsy nahafahako nihetsika ka tahy ho sakana ho an'ireo izay te-handositra. Nosintonin'ny namako tamin'ny tanako aho dia notaritiny handositra ho fiarovana ahy, ary nanomboka tamin'izay fotoana izay dia nanangona tantara momba izany hoe eo amoron-tevan'ny fahafatesana aho, maratra na voasambotra, ary ny fomba firotsak'ireo olona misaina kokoa miohatra amiko miditra an-tsehatra sy manavotra ahy.
Mbola mila fotoana maharitra ny sampam-pitsikilovana Syriana amin'ny famoronana ny antotan-taratasy mikasika ahy, indrindra fa misy mpanome vaovao iray isaky ny Syriana 10 fara-faharatsiny. Nandritra izay fotoana izay, sy herintaona taorian'ny fihainoana ny torohevitry ny fianakaviana sy ny namana mba ho malina hatrany dia tonga taminà fiolana-dàlana aho : nampijaliana teo amin'ny toeram-pisafoan'ny tafika tany Aleppo ny reniko. Very mandrakizay ny ilako.
Nanomboka niantso ahy ny manam-pahefana ary nanadihady ahy momba ny asako isan-kerinandro, noho ilay fandevenana mahavariana, natrehin'ireo mpitaky fiovana marobe izay niara-ory tamiko nitondra raozy mena. Tamin'izay fotoana izay, nanakaiky an'i Alepo ny fitakiam-piovàna mitàm-piadiana, ary tamin'izay ihany koa no nanoherako ny fitaovam-piadiana amin'ny endriny rehetra. Nino aho fa mety ho antoka hananan'ny Syriana ny zony sy hahavitsy ny isan'ireo maty ny fiovàna am-pilaminana. Amin'ny ankapobeny dia efa afaka ny ampahany betsaka amin'ny tanànako, ankoatra ny vakim-paritra misy ahy sy ireo toerana mahazatra ahy izay mbola eo ambany fifehezan'ny fitondrana Syriana.
Rehefa niha-matotra hatrany ny fanadihadiana, ary toy ny tsy azo ialana fa akaiky ny fisamborana ahy, dia nanaiky ny vatsim-pianarana hianatra amin'ny ambaratonga ambony any Angletera aho. Toy ireo sisa velona tamin'ireo fotoana nohoson-drà izay hitako, niverina matetika tany Syrira, tany Aleppo, nentin'ny fahatsiarovan-tena ho meloka aho nandritra iny taona iny. Nifindrafindra tamin'ny tranon'ireo namako aho mandra-pahatandindonin-doza ny fiainan'izy ireo noho ny fiarahany amin'ny mpitolona tahaka ahy satria loza ho ahy ny miverina any an-tranoko. Avy eo, voatery aho nandray fanapahan-kevitra matotra, tena marina, ary nifindra tany amin'ilay faritra efa afaka tao Aleppo, nilaozako ny namako, ny fianakaviako, ireo fahatsiarovako rehetra, ny tranoko sy ny fasana misy ireo ray aman-dreniko. Raha fintinina dia ny ankamaroan'ny fiainana nahazatra ahy.
Fanamby vaovao hafa indray ny miaina toy ny mpikomy mafana fo nandritra ny fotoanan'ny ady, ny miaina irery ary lavitry ny fianakaviana sy ireo tontolo manodidina mahazatra. Nifindra tany amin'ny faritra izay tsy misy na inona na inona fantatro aho afa-tsy ny tsy nahitàna fisian'ny tafi-piarovan'ny fitondrana. Saingy tsy mbola afaka amin'ny endrika fahafatesana rehetra akory izy io.
Satria iray amin'ireo vehivavy vitsivitsy tsy misarom-boaly ao anaty tontolo mpitahiry ny ela sady tsotra aho, anivon'ireo olona maha-te ho tia na dia eo aza ny herisetran'ny tontolo misy azy ireo, indraindray mahatsiaro fa tena ho irery aho. Miaina ao anaty tahotra ny hisy haka an-keriny foana aho. Indraindray mahatohitra aho, fa indraindray anefa reraka ihany koa.
Voahodidin'ny tantaran'ireo mahery fo izay herim-po mety hakàn'ireo hafa te-hiaina fiovana aingam-panahy aho. Noho ireo rehetra ireo, sy noho ny fiainanay andavan'andro feno zava-mitranga izay tsy ho ampy ho an'ny fotoana hiainana, dia nanapa-kevitra ny hanoratra ho anareo aho. Mahakasika ny fiainako andavan'andro ny lahatsoratra soratako matetika, fa indraindray mikasika ireo fahatsiarovana sy ny tokony hitiavanay ny fiainanay araka izay isehoany, na dia eo aza ny zava-mahatsiravina izay hitanay.
Malalaka ny safidinao na hifampitsetsetra miaraka amiko na ho hentitra amin'ny fitsarànao. Fa ny fanantenako dia mba ho taratra amin'ireo ambarako aminareo ny sasany amin'ny nofinofy, ny faniriana fiovàna ary fahatokiana fa mety hisy io fiovàna io, na dia sarotra visaina sy mety maharary aza izay nofy izay.
Mpitolona mafana fo sady mpitoraka bilaogy marcellita.com , ary mibitsika amin'ny @Marcellita  i Marcell Shehwaro, amin'ny fiteny Arabo.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2014/03/17/58570/
 reniko (efa maty), : https://globalvoicesonline.org/2012/06/18/syria-regime-assailants-kill-bloggers-mother/